Dowlada Somalia oo sheegtay in howlgal lagu beegsaday Shabaab ay ka fuliyeen Xarardheere… – Hagaag.com
Dowlada Somalia oo sheegtay in howlgal lagu beegsaday Shabaab ay ka fuliyeen Xarardheere…
Posted on 18 Oktoobar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Warsaxaafadeed ka soo baxay dowladda Federalka Somaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada oo kaashanaya saaxiibadooda caalamka ay fuliyeen howlgal ay ku beegsadeen Saraakiil ka tirsan Shabaab.
Warsxaafadeedka ayaa u qornaa sidan.
Dawladda Soomaaliya oo gacan ka helaysa Saaxiibo Caalami ayaa agaasintay hawlgal qorshaysan oo lagu beegsaday Saldhig ay Argagixisada Alshabaab ku lahayd agagaarka Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug.
Howlgalkaan oo si wanaagsan ula kulmay ujeedadii laga lahaa ayaa lagu dilay ku dhawaad 70 ka tirsan Alshabaab kuwaas oo isku diyaarinayay weeraro argagixiso oo ay ku waxyeelayn lahaayeen Shacabka Soomaliyeed.
Dadka ku dhintay hawlgalkaan waxaa ku jira Horjoogayaal sar sare iyo kuwo ku takhasusay maleegista falalka waxyeelaynta maatida ee Kooxdu ku mashquulsantahay, mana jirto waxyeelo soo gaartay Shacabka Soomaaliyeed maadaama bartilmaameedku ahaa Sal-dhig ay isku uruursanayeen Shabaab.
Dowladda Soomaaliya waxeey u mahadcelinaysaa Bulshada Deegaanka iyo Saaxiibada caalamiga ah oo la’aantood aanu suurtagal noqdeen howlgalkaan.
Dowladdu iyada oo kaashanaysaa Shacabkeeda iyo saaxiibada Caalamiga ah waxeey xaqiijinaysaa in ay ka go’antahay sii labanlaabista Weerarada Kooxaha Sharwadayaasha ah ee ku hawlan in ay waxyeeleeyaan Shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliyeed waxeey ugu baaqaysaa Qaybaha kala duwan ee Shacabka Soomaaliyeed in ay ka qaybqaataan Dagaalka ka dhanka ah Kooxaha Nolol-diidka ah, sidoo kale waxeey ka codsanaysaa Saaxiibada Caalamiga ah in ay sii kordhiyaan garab- istaagooda Dowladda iyo shacabka Soomaaliya si looga guulaysto Argagaixisada Soomaaliya ku dhuumanaysa.